TTSweet: January 2012
ဂျူဂျူလေးတို့ ဒီနေ့ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ပြီ။
Ju Ju's First day of school, ahead to Year 3
အန်တီဆွိတို့လဲ ကျောင်း ၁လခွဲ ပိတ်လိုက်တာ ဟောလီးဒေးကာလအတွင်း ဆစ်ဒနီနဲ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်က်ို လည်ကြတာ တော်တော်ကို စုံသွားတယ်။ ဘာဟောလီးဒေးပလန်မှ မရှိပဲ အားရင်အားသလို ကြုံရင်ကြုံသလို စိတ်ကူးပေါက်ရာ ထွက်လည်ကြတာ။ ဟောလီးဒေးမတိုင်မီက ညီမလေး ရို့စ် တက်ဂ်ထားတဲ့ Holiday Plan ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးလဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆစ်ဒနီကို အလည်ရောက်ရင် လည်း ဒီနေရာတွေက လည်လို့ ကောင်းတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ အကြောင်းလည်း အသိပေးရင်းပေါ့။
ဂျူဂျူလေးရဲ့ ဟောလီးဒေး Activities အမှတ်တရ
Birthday Girl Ju Ju (17-Dec-2011 -Sat)
ဒီနှစ်တော့ ဂျူဂျူလေးရဲ့ မွေးနေ့ပွဲကို Hungry Jack ဆိုင်မှာ ခလေးတွေအတွက် လုပ်ပေးပြီး လူကြီးတွေအတွက်တော့ တရုတ်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ ကျွေးခဲ့ပါတယ်။
Christmas Eve count down and firework
Darling Harbour (24-Dec_2011-Sat)
အဲဒီနေ့က ဒါလင်ဟားဘားမှာ အရမ်းကို လူများပါတယ်။ အသိမောင်လေး လင်မယားက နေ့လည်ကတည်းကနေ နေရာကောင်းရအောင် ဦးပေးထားလို့ အဆင်ပြေသွားတာ။
Taronga Zoo (27-Dec_2011-Tue)
တိရိစာဆန်ရုံကတော့ ဂျူဂျူလေး ပူဆာလွန်းလို့ လိုက်ပို့ရတာ။ ရထားစီး၊ ဘုတ်စီးပြီး သွားကြတယ်။ ဘုတ်စီးရတာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ဂျူဂျူလေး ဘုတ်ပေါ်မှာ ပျော်နေတာ။ လေတွေသူ့ပါးစပ်ထဲ ၀င်လာတာကို ခံထားတာတဲ့။ သူပျော်တော့ အဖေတွေ အမေတွေလဲ ပျော်ပေါ့။
Sydney Aquarium (31-Dec-2011-Sat)
ငါးပြတိုက်ကတော့ အရင်က ပါ့သ်မှာလဲ ရောက်ဖူးတော့ သိပ်တော့ အထူးအဆန်းမရှိလှပါဘူး။ သူက ဒါလင်ဟားဗားနားမှာပဲ။ Sydney Eye Tower နဲ့ အတူတူ package လက်မှတ်ဝယ်ပြီး သွားကြတာ။
Sydney Eye Tower (31-Dec-2011-Sat)
ဆစ်ဒနီမြို့ကို အပေါ်စီးကနေ အကုန်လှမ်းမြင်ရတာပေါ့။ ရှူခင်းကြည့်လို့ ကောင်းတယ်။ နေက ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့ လူပုံတွေရိုက်တာတော့ မကောင်းဘူး။ ရှူခင်းပုံတွေတော့ လှတယ်။
New Year Eve count down and firework
The Rock (31-Dec-2011-Sat)
New Castle Beach (1-Jan-2012-Sun)
Cumberland State Forest - Forest walk (15-Jan-2012-Sun)
Wollongong Trip (Sea Cliff Bridge)(21-Jan-2012-Sat)
Wollongong Trip (Kiama Blow Hole)(21-Jan-2012-Sat)
Wollongong Trip (Nan Tien Temple)(21-Jan-2012-Sat)
The Entrance ( 22-Jan-2012-Sun)
Blue Mountain (24-Jan-2012-Tue)
Information လေးတွေ သိရအောင် ခေါင်းစဉ်မှာ လင့်ခ် လေးတွေပါပေးလိုက်ပါတယ်။ အော်ဇီလာလည်ရင် အဲဒီနေရာတွေကတော့ ရောက်အောင်သွားရမှာပါ။
Sydney Opra House, Bondi Beach, Manli Beach တို့ တွေလဲ နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဆစ်ဒနီရောက်ရင် လည်ရမဲ့နေရာတွေပါ.။ အဲဒါတွေကတာ့ အရင်က ရောက်ဖူးပြီးသားတွေမှို့ မထည့်ထားတော့ပါ။
ပဟေလိ ... အောက်ဆုံးမှာ ဦးမောင်ခြိ်မ့် ဘာဖြစ်တာတုံး ... ???????
Posted by T T Sweet at 2:46 PM 11 comments:
Labels: ရှုမငြီးတဲ့ ချစ်သမီး လေး ..., အော်စီနဲ့ ပတ်သတ်သမျှ ...
Posted by T T Sweet at 9:22 AM 26 comments:
မနက်အိပ်ရာကထ ညက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ နာရီလေးကို မြင်ချင်လို့ ဆွိတို့အခန်းထဲ တိုင်ကပ်နာရီလေးတစ်လုံး ထပ်ဝယ်ရအောင် ယောက်ျားရေဆိုတော့ အခန်းတိုင်းမှာ နာရီတွေနဲ့ တစ်အိမ်လုံးလဲ နာရီတွေပြည့်နေပြီတဲ့၊ ဘာလုပ်မလဲတဲ့။ အိမ်ဦးနတ်ကြီးဆိုတော့လဲ သူပြောတဲ့ အတိုင်းပေါ့။ အထွန့်မတက် အသာနေရတယ်။
ဒါနဲ့ စလုံးက ပါလာတဲ့ စားပွဲတင်နာရီ အစုတ်ကလေးကိုပဲ ကြည့်ကြည့်နေရတယ်။ မျက်လုံးလေးဖွင့်ရုံမဟုတ်၊ ခေါင်းလေးတော့စောင်းကြည့်ရသပေါ့။ မနက်မနက် ၅နာရီလောက် စောစောနိုး၊ အွန်လိုင်း ဟိုလျှောက်ဖတ်၊ ဒီလျှောက်ဖတ်နဲ့ ၆နာရီလောက်ကျ ပြန်အိပ်ချင်လာပြန်၊ ပြန်အိပ်တော့ မနက်ထရမဲ့ အချိန်ကျ လူကမနိူးတော့။ တစ်ခါတစ်ရံလဲ "ထရမယ် ... ထရတော့မယ်" နဲ့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မရတော့ဘူး။
ဒါနဲ့ နာရီအစုတ်လေး alarm ပေး အိပ်ပြန်တယ်။ နာရီက အစုတ်ဆိုတော့ alarm က အတိအကျ ပေးမရဘူး။ လက်တံနဲ့ အသံကလွဲနေတော့ ဒုက္ခ။ ကိုယ်ပေးတဲ့ အချိန်ကတခြား၊ မြည်တဲ့ အချိန်က တလွဲတွေဖြစ်လာတော့ အချိန်တော်တော်ကြာ နာရီသံပတ် alarm မပေးပဲနဲ့ အိပ်ရေးပျက် မနက်တွေကများလာ။
ဒါနဲ့ တစ်ရက် အော် ငါ့နှယ် ဒီအိုင်တီခေတ်ကြီးမှာ အိုင်ဖုန်းတွေ၊ အိုင်ပက်တွေ ကိုင်နေပြီး နာရီသံပတ်ပေးတာတောင် ဒုက္ခရောက်နေရသလားဆို အိုင်ဖုန်းကလေးနဲ့ နှိုးစက်ပေးဖို့ သတိရတယ်။ setting မှာ ဘာသံလဲ ringtone ရွေးဆိုတော့ မနက် ညင်ညင်သာသာနှိုးမယ်ထင်ရတဲ့ Crickets ဆိုတဲ့ အသံလေးရွေးလိုက်တယ်။ မနက်ခင်းမယ် ထရတဲ့အခါ alarm သံရွေးတာလဲ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ အဆောင်မှာနေစဉ်က အခန်းဖော် မန်းသူတစ်ယောက်သယ်လာတဲ့ ဗို့အားတစ်ထောင် alarm ကို မမေ့သေးဘူး။ အသံကြားတာနဲ့ ကောက်ပေါက်ချင်စရာကောင်းလောက်အောင် ကျယ်လောင်ဆူညံတဲ့ "ကလင် ကလင်င်င်င်င် ..." ဆိုတဲ့ အသံကတော့ တစ်သက် မမေ့စရာဖြစ်ခဲ့သကိုး။
ဒါနဲ့ ခရစ်ကတ် အသံလေး "ကကျစ် ကကျစ်" နဲ့ မနက်တိုင်း ဟန်ကျနေရာကနေ ပြသနာက ပေါ်ပြန်တယ်။ ဖုန်းကို အိပ်ခါနီးတိုင်း အနားမှာ ယူထားဖို့ ဘယ်သတိရမလဲလေ နော့။ အဲလို အပြင်မှာ မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ မနက်တွေဆို တစ်ခါတစ်ရံ အိပ်မပျော်နိုးတစ်ဝက် အပြင်က ပုရစ်သံ ကကျစ်ကကျစ်နဲ့ တောထဲများရောက်နေလား တွေးထင်ရတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ နိူးနေတဲ့ နေ့တွေကျပြန်တော့လဲ သွားထပြီး ပိတ်ရမှာ ပျင်းတာနဲ့ ဒီအတိုင်းပစ်ထားလိုက်တာ တစ်မနက်လုံး အိမ်ရှေ့မှာ ကကျစ်ကကျစ်နဲ့ ဆူပွက်လို့၊ တော်တော်နဲ့ မရပ်တော့ဘူး။ alarm က ထရမဲ့ အချိန်ထက် နာရီဝက်ကြိုပေးထားသကိုး။
နောက်တစ်ခု ရယ်ရတာက ကိုယ်က စောစောထတတ်တော့ အများအားဖြင့်တော့ နာရီမနှိုးခင် ကိုယ်က နိုးနေတာများတယ်။ ရက်တော်တော်များများကတော့ အော် ခရစ်ကက်လေးလဲ မအော်သေးပါလားဆို နားစွင့်နေရတာများတယ်။ သူအော်တော့မယ် ... အော်တော့မယ်ဆို အော်ခါနီးရင် နေရာယူ၊ အသင့်ပြင် .... အော်တာနဲ့ မြားလေး ထဆွဲရတယ်။ ရယ်ရချက်။
တစ်နေ့ကတော့ အိမ်ကလူက ကွန်ပလိမ့်တက်တယ်။ alarm နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး။ ညည်းဟမ်းဖုန်းကတဲ့ ခေါ်လို့လဲမကြား၊ အော်လို့လဲမကြားတဲ့။ အဲဒါလေး ဂရုစိုက်ပါဦးအေတဲ့။ ရှော့ပင်ထွက်ရင်းနဲ့ ဖုန်းခေါ်တိုင်း မကြားတာတွေက များလာလို့ ကွန်ပလိမ့်တက်တာ။ များလာတော့ ကိုယ်လဲ ဆင်ခြင်ဦးမှပါလေဆို ကြည့်လိုက်တော့ miss call က ၅ခါတောင်ဆိုတော့ ခပ်လန့်လန့်ရှိလှနဲ့ ဖုန်းက ရှိသမျှ ring tone အသံတွေကို အကျယ်ဆုံးထား၊ ရှိသမျှ အသံတွေအကုန် vibration နဲ့ တွဲထားပလိုက်တယ်။
ပထမအကြိမ်စမ်းသပ်ချက်အရ အောင်မြင်တယ်ပြောရမယ်။ ဒီလောက် လူတွေဆူညံနေတဲ့ ရှော့ပင်းစင်တာတစ်ခုမှာ သူခေါ်တဲ့ ပထမဆုံးဖုံးကို ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကြားတယ်ဗျား။
ဒီမနက် အိပ်ရာက စောစောနိုးနေပြန်တယ်။ ၆နာရီလောက်ပြန်အိပ်။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ကောင်းတုံးရှိသေး တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ နံနက်ခင်းမှာ ရုပ်တရက်ကြီး "ဗရူးဗရူး ကကျစ် ကကျစ် ... ဗရူးဗရူး ကကျစ် ကကျစ်" နဲ့ ခါတိုင်းလို ခရစ်ကက်အသံက ညင်ညင်သာသာမရှိပဲ ခရစ်ကက်ကို စတင်းဂမ်းနဲ့ဆော်၊ ပုရစ်က ကကျစ်ကကျစ်နဲ့ အသံကို ပြဲနေအောင် အော်တဲ့ အသံမျိုး။ ဟဲ့ ဟဲ့ ပလုပ်တုတ်ဆို ကမန်းကတမ်း ဟမ်းဖုန်းကို လက်နဲ့ ထစမ်းတာ စမ်းမမိဘူး။ စတင်းဂမ်းသံက ပိုတောင်ကျယ်လာတယ်ထင်လို့ အိပ်ချင်မူးတူးမျက်လုံးကို ပြူးပြဲကြည့်ပြီး ရှာမှ ဒီစတင်းဂမ်းမှန်တဲ့ ခရစ်ကက် အဲလေ ဟမ်းဖုန်းကို အမြန်ဖမ်း၊ မြားလေးကို အမြန်ဆွဲမှ ခရစ်ကက်လဲသေ၊ အဲလေ alarm အသံလဲ ပျောက်တော့တယ်။
အသာလုပ်ပါ ခရစ်ကက်တို့ရယ်။ ဘေးက ဂျူဂျူလေး လန့်နိူးမှဖြင့် ဆို သက်ပျင်းချ ။
ဟိုနေ့က လန့်လန့်နဲ့ ring tone တွေအကုန် ကျယ်ပြီး ဗိုက်ဗရေးရှင်းထည့်လိုက်မိတာ ငါးပါးမှောက်။ ဗိုက်ဗရေးရှင်းအသံက တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ စတင်းဂန်းဆွဲနေတဲ့ အတိုင်းပဲကိုး။
(ပိတ်သတ်ကြီးက တောင်းဆိုလာလို့ ပို့စ်တစ်ပုဒ် အမြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ ဂျူဂျူလေး ကျောင်းပိတ်ရက်မှို့ သူ့ကို အန်တာတိန်းနေရလို့ ပျောက်နေတာ ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါ။)
Posted by T T Sweet at 7:22 PM 27 comments: